Insights Audiense: Rindrambaiko momba ny faharanitan-tsaina sy famakafakana ny mpijery | Martech Zone
Paikady sy fanamby lehibe rehefa mamolavola sy mivarotra marika dia ny fahatakarana hoe iza ny tsenanao. Ireo mpivarotra lehibe dia misoroka ny fakam-panahy maminavina satria matetika isika no mitongilana amin'ny fomba fiasantsika. Ny tantara anecdotal avy amin'ireo mpanapa-kevitra anatiny izay manana fifandraisana amin'ny tsenany matetika dia tsy mampiseho ny fomba fijery ankapobeny ny mpihaino antsika dia noho ny antony vitsivitsy:
Tsy voatery ho salan'isa na mpanjifa tsara indrindra ny mpanjifa na mpanjifa mafy indrindra.
Na dia mety manana toby mpanjifa manan-danja aza ny orinasa iray, tsy midika izany fa manana fototra mpanjifa mety izy.
Ny ampahany sasany dia tsy noraharahiana satria kely izy ireo, saingy tsy tokony ho izany satria mety hahazo tombony ambony indrindra amin'ny fampiasam-bola amin'ny varotra.
Ny angon-drakitra ara-tsosialy dia toeram-pitrandrahana volamena amin'ny famoahana ireo mpihaino sy fizarana noho ny angon-drakitra manankarena sy be dia be misy. Ny fianarana amin'ny milina sy ny fahaizana manodina izany angon-drakitra izany dia manome alalana ireo sehatra hamantatra am-pahakingana ny ampahan'ny mpihaino sy hamakafaka ny fitondran-tena, manome fomba fijery azo atao izay azon'ny mpivarotra ampiasaina mba hanatratrarana tanjona tsara kokoa, manokana ary hahazoana vokatra tsara kokoa.
Inona no atao hoe Intelligence Audience?
Faharanitan-tsain'ny mpihaino dia ny fahaiza-mahafantatra ny mpihaino mifototra amin'ny famakafakana ny angon-drakitra tsirairay sy ny fitambaran'ny mpanjifa. Faharanitan-tsain'ny mpihaino Ny sehatra dia manome fomba fijery momba ireo fizarana na vondrom-piarahamonina izay mamolavola izany mpihaino izany, psychografika ary demografika ary manana fahafahana mampifandray ny ampahan'ny mpihaino amin'ny sehatra fihainoana ara-tsosialy sy analyse, fitaovana marketing influencer, sehatra dokam-barotra nomerika ary sehatra fikarohana momba ny varotra na mpanjifa.
Audiense dia manampy ireo marika hamantatra ireo mpihaino mifanentana amin'ny fomba fijery azo ampiharina izay manampy amin'ny fampahafantarana ireo paikady hampitomboana ny orinasanao. Miaraka amin'ny Audiense Insights, azonao atao:
Fantaro izay mpihaino na fizarana rehetra - Audi Armeniana mamela anao hamantatra sy hahatakatra ny mpihaino rehetra, na inona na inona manokana na miavaka amin'ny fanaovana fanadihadiana ny mpihaino sosialy. Manambatra mora foana ny safidy sivana maro rehefa mamorona tatitra ianao, toy ny mombamomba ny mpampiasa, ny fifandraisana, ny demografika ary ny andraikitry ny asa, mamorona fizarana mpihaino manokana. Miaraka amin'ny Audiense Insights azonao atao ny mamantatra ny faharanitan-tsain'ny mpihaino mba handraisana fanapahan-kevitra ara-barotra tsara kokoa, hampifanaraka ny tanjonao, hanatsara ny maha-zava-dehibe ary hitondra fanentanana mahomby amin'ny ambaratonga.
Fantaro avy hatrany hoe iza no mandrafitra ny mpihaino kendrenao - Audiense Insights mihatra fianarana milina mba hahatakarana avy hatrany hoe iza no mandrafitra ny mpihaino kendrenao, amin'ny famakafakana ny fifandraisana misy eo amin'ireo olona mamolavola azy. Mihoatra noho ny fizarana nentim-paharazana mifototra amin'ny taona, ny lahy sy ny vavy ary ny toerana misy anao, izao ianao dia afaka mahita fizarana vaovao mifototra amin'ny tombontsoan'ny olona sy mahatakatra ny tsena kendrenao amin'izao fotoana izao amin'ny ambaratonga lalindalina kokoa. Ny sehatra faharanitan-tsain'ny mpihaino azy dia ahafahanao mampitaha fizarana amin'ny tsipika fototra na mpihaino hafa ary mamorona benchmark miaraka amin'ny fizarana, firenena na mpifaninana hafa.
Tompon'ny angonao – mitambatra Audiense Insights miaraka amin'ny angon-drakitrao manokana na sary. Manondrana fotsiny ny tatitrao any PDF or PowerPoint endrika hampiasana ireo hevi-baovao mifandraika indrindra momba ny mpihaino anao ao amin'ny tokotaninao. Na koa, manondrana ny hevi-baovao tsirairay amin'ny a CSV mba hahafahanao manodina, mizara na mampiditra azy ireo mora foana ao amin'ny fikambananao.
Ahoana ny fomba hamoronana tatitra maimaim-poana ho an'ny mpihaino anao
Ity misy vidéo famintinana ny fomba fampiasana Audi ArmenianaNy drafitra maimaim-poana an'ny famoronana tatitra Insights amin'ny fampiasana ny mpamosavy famoronana fototra ho an'ny mpihaino. Aza avela ny teny fototra mamitaka anao anefa. Ny tatitra dia manome demografika, jeografika, fiteny, bio, taona, socioeconomics, affinity marika, influencer marika, tombontsoa, ​​fifandraisana amin'ny haino aman-jery, votoaty, toetra, toe-tsaina mividy, fahazarana an-tserasera, ary ny fizarana 3 ambony!
Amboary ny famakafakana ny fahafantaran'ny mpihaino maimaim-poana anao
Fanambarana: mpiara-miasa amiko aho Audi Armeniana ary mampiasa ny rohiko amin'ity lahatsoratra ity aho.
Tags: fanadihadiana ny mpihainofaharanitan-tsaina ny mpihainohevi-baovaofamakafakana mpihaino marikafikarohana marikafaharanitan-tsaina mpifaninanafanadihadiana ny mpanjifamombamomba ny mpanjifafanadihadiana mpanarakafizarana mpanarakafanadihadiana influencersegmentationfanadihadiana ny mpihaino amin'ny media sosialymombamomba ny media sosialy
Marpipe: Miaro ny mpivarotra amin'ny faharanitan-tsaina ilainy hitsapana sy hahitana famoronana doka maharesy